Mbola trosa ireny vola azo ireny
Mampihemotra ny maro ny fambolena sy ny fiompiana. Amin’izao taonjato izao, lasa karazana sokajin’asa ambany izany fambolena sy fiompiana izany. Tsy tongatonga ho azy anefa izany fa betsaka ny antony eto Madagasikara : tsy fahampiana hoenti-miasa, tsy fandriampahalemana fa eo koa ny tsy fahazotoana fotsiny izao.
Na izany aza, misy ny ezaka ataon’ny fanjakana sy ny tsy miankina. Hita izany izao any Alaotra, amin’ny fananganana orinasa mpanamboatra zezika. Raha any atsimo indray, manao izay tandrify azy ireo fikambanana maro tsy miankina, eto an-toerana sy avy any ivelany, toy ny ataon’ny Amerikanina. Mandeha ila ihany anefa izany raha tsy misy tetikasa fampandrosoana any ambanivohitra iombonan’ny minisitera maro. Anisan’izany ny famokarana angovo, fanaovan-dalana, fiantohana ny fandriampahalemana, fampianarana, fahasalamana. Mifandray amin’ny fiainam-bahoaka daholo ireo.
Mitaky tetibola matanjaka avokoa ireo asa ireo, koa raha ny marina, tompon’antoka voalohany ny fanjakana araka ny famaritany ny tetibola ho an’ireo minisitera isanisany ireo. Tsy tetibola tsotra ho an’ny fandaniana mahazatra ihany fa ho an’ny tetikasa mivantana. Manampy amin’izany ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Koa raha ny rariny, tokony hahitana tombontsoa izany famatsiam-bola, satria mbola trosa koa izy ireny.